लागु औषध दुर्व्यसन नियन्त्रणमा अभिभावकको पहिलो दायित्व - Onlinekhabarhub.com
लागु औषध दुर्व्यसन नियन्त्रणमा अभिभावकको पहिलो दायित्व
बुधबार ८ मंसीर २०७८ ११:५३:२४ बजे
दिपेश बस्नेत, काठमाडौं । हामिले सामान्य तरिकाले बुझ्दा बिभिन्न मादक पदार्थ, लागु तथा पेय पदार्थ जसले मानिसको दिमागलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हानि पुर्याउँछ वा जसको सेवन तथा प्रयोगले व्यक्तिको मानसिक स्थिति तथा शारिरीक स्थितिमा परिवर्तन हुन्छ त्यस्ता बस्तुहरूलाई लागु औषध भनिन्छ । लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अनुसार लागु औषध भन्नाले गाँजा, औषधोपयोगी गाँजा, अफीम, तैयारीको अफीम, औषधोपयोगी अफीम, कोकाको झार र पात, अफिम तथा कोकाको सारतत्व, मिश्रण वा लवण समेत मिसाई तयार गरिने पदार्थलाई सम्झनु पर्दछ । नेपालको कानुन अनुसार लागु पदार्थको अबैध ओसारपसार, संचय तथा प्रयोग गर्न बन्देज लगाईएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार ८ मंसीर २०७८ ११:५३:२४ बजे
हेलो सरकार ! पैसा नहुनेले अस्पतालको छतबाट हाम फालेर मर्नु पर्ने हो ?
नेपालमा आर्थिक विपन्नता हुनु वा आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारमा
दिपेश बस्नेत, काठमाडौं । हामिले सामान्य तरिकाले बुझ्दा बिभिन्न
डा.उत्तम खनाल(अर्थ राजनीतिक विश्लेषक)अहिले नेपालको राजनीति निकै चलायमान र
एम.सी.सी.,यसको बिरोधका कारण र प्रचण्डको भित्री भुमिका !
हर्क सिंह केसी, पछिल्लो चोटि नेपाली राजनीतिक आकाशमा बृहत
प्रधानमन्त्री बनेपछि पार्टी कार्यालय जानु हुँदैन हो, देउवा जी !
प्रधानमन्त्री बनेपछि पार्टी कार्यालय नटेक्ने नेपाली नेताहरुको चलनै बन्यो
मनोज लामा, काठमाडौं । झट्ट सुन्दा असान्दर्भिक विषय लाग्न